Tencent ၏ ပိုင်ဆိုင် မှုများ တိုးမြှင့် ပြီးနောက် Didi ၏ စတော့ရှယ်ယာ ၉% တိုးတက် ခဲ့သည် – Pandaily
Tencent ၏ ပိုင်ဆိုင် မှုများ တိုးမြှင့် ပြီးနောက် Didi ၏ စတော့ရှယ်ယာ ၉% တိုးတက် ခဲ့သည်
Feb 11, 2022, 11:54မနက် 2022/02/11 14:14:27 Pandaily
Securities and Exchange Commission သည်တရုတ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး များအား အကြံပြု သည့် စာရွက်စာတမ်း တစ်ခုကို ကြာသပတေး နေ့က ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်Tencent သည် Class A ၏ရှယ်ယာ ၁. ၈ သန်းခန့် ပိုင်ဆိုင် မှုကိုတိုးမြှင့် ခဲ့သည်တက္ကစီ ကုမ္ပဏီ Didi Global Inc တွင် ၎င်း ၏လက်ရှိ အစုရှယ်ယာ များနှင့်အတူ Tencent ၏ အစုရှယ်ယာ သည် ဇွန် လက IPO မတိုင်မီ ထုတ်ဖော် ခဲ့သည့် ၆. ၄% မှ ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ တွင် ၇. ၄% သို့ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ကြာသပတေး နေ့က ကုန်သွယ် မှုတွင် Didi ၏ရှယ်ယာ ၈. ၈ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သည်။
Didi သည် ထိုကဲ့သို့သော ယုံကြည်မှု တိုးမြှင့် မှုကို အရေးတကြီး လိုအပ် ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကန ဦး အများပိုင် ရောင်းချ မှု နောက်ပိုင်း တရုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ နှိမ်နင်း မှုကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ စတော့ရှယ်ယာ များ သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ပြည်တွင်း စည်းမျဉ်း သတ်မှတ် သူများက သူတို့၏ ဒေတာ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ် ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆို ပြီးနောက် ရှစ် လ မပြည့် မီ စျေးကွက် တန်ဖိုး မှာဒေါ်လာ ၄၇ ဘီလီယံ ကျဆင်းခဲ့သည်။ Didi သည် ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ လက အမေရိကန် စတော့အိတ်ချိန်း မှ ဖျက်သိမ်း ခဲ့သည်။ဟောင်ကောင်တွင် စာရင်း ရှာ ခြင်းအဲဒီ အစား ။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ လကုန် ပိုင်းတွင် Didi သည် Q2 နှင့် Q3 ဘဏ္ reports ာရေး အစီရင်ခံစာများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ US General Accounting Standards အရ ဒုတိယ သုံးလပတ် နှင့်တတိယ သုံးလပတ် အတွက် စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၄၈. ၂ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇. ၅၈ ဘီလီယံ) နှင့် ယွမ် ၄၂. ၆ ၇၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆. ၇၁ ဘီလီယံ) ဖြစ်ပြီး သာမန် ရှယ်ယာရှင် များ မှရရှိသော အသားတင် အရှုံး မှာယွမ် ၂၄. ၄ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃. ၈၄ ဘီလီယံ) နှင့် ယွမ် ၃၀. ၆ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄. ၈၁) ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Didi ၏ဥက္က chairman ္ဌ နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Zhang Yong သည် ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့မှ နုတ် ထွက်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ အကြီးတန်း ဥပဒေရေးရာ ဒါရိုက်တာ Zhang Yi ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Didi သည်ဒေါ်လာ ၄. ၈ ဘီလီယံ အရှုံးပေါ် ကြောင်း Alibaba စီအီးအို Zhang Yong နှုတ်ထွက်
မကြာသေးမီက ပြောင်းရွှေ့ မှုသည် မကြာသေးမီ လ များအတွင်း Tencent မှ ကြေငြာ ခဲ့သော အခြား ကုမ္ပဏီများ ၏ရှယ်ယာ အပြောင်းအလဲ များ နှင့်သိသိသာသာ ခြားနား သည်။ ဇန်နဝါရီလ အစောပိုင်းတွင် Tencent သည်စင္ကာပူ အေျခစိုက္ နည္းပညာ ကုမၸဏီ Sea Limited ျဖစ္ပါတယ္။ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် အခြား တရုတ် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ များ၏ အစုရှယ်ယာ များ ကိုလျှော့ချ ရန်စီစဉ် နေ သည်ဟူသော ထင်မြင် ချက်များ ထွက်ပေါ် လာခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော တစ်လ ခန့်က Tencent က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများကို ပြောကြား ခဲ့သည်မှာ ၎င်းသည် စီစဉ် ထားသည်JD.com ၏ရှယ်ယာ များပိုမို ခွဲဝေ ခြင်းအစုရွယ္ယာ သန္း ၄ ၆၀ ေက်ာ္ကို တစ္လံုး တစ္ ခဲ တည္း အျမတ္ ေ၀ စု အျဖစ္ ေပးေ၀ ျခင္းျဖင့္ ။ ထို့ကြောင့် Tencent ၏ အစုရှယ်ယာ သည် ၁၇% မှ ၂. ၃% သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။